मेघराज सापकोटा - कान्तिपुर समाचार
मेघराज सापकोटा का लेखहरु
हीरा म्याडम हीरा नै रहिछिन्
मेघराज सापकोटा, कार्तिक २७, २०७४
‘भिजिट भिसामा ल्याएर १९ जना नेपालीहरुलाई अलपत्र पार्ने एजेन्टलाई कारबाही गर्न सफारिस दिनुपर्‍याे म्याडम । कम्तीमा नेपाल गएर पनि ती पीडितहरुले न्यायको ढोका ढक्ढक्याउने आधार बनोस्’ मैले यादवलाई अनुरोध गरेको थिएँ । धेरैदिन पछि पीडितहरु नेपाल पुगिसके पछि यादवले पीडितलाई उक्त पत्र उपलब्ध गराईन् । हामीलाई प्राप्त स्रोतहरुले हामीलाई भनिरहेका थिए, कि त्यो पत्र लेख्न पनि यादवलाई दूतावास भित्रै पापड बेल्नु परेको थियो ।
एनआरएनभित्रको राजनीति : नाकको राजनीति सुरु भएकै हो त?
मेघराज सापकोटा, आश्विन २४, २०७४
‘अबको केही बर्ष गैरआबासीय नेपाली संघको राजनीति नाकको वरीपरी घुम्ने सम्भावना छ’, दुवईमा भेट भएका एक एनआरएनकर्मीले पाक्तिकारसँग भनेका थिए । हाँसेर हल्का ढंगले आफ्नो चोर औंला नाक निर लगेर भनेको उनको यो भनाइले पक्कै केही अर्थ राख्दछ । उनले नाक भनेर अक्टोबर १४ देखि १६ तारिक सम्म काठमााडौमा हुन गईरहेको एनआरएनको सम्मेलनमा अबको नेतृत्व छनौटमा जातीय नाराले प्रभाब पार्ने साकेत गरेका थिए ।
युएईबाट मन्त्रीहरुलाई खुलापत्र : मरिसकेको हो मेरो सरकार ?
मेघराज सापकोटा, श्रावण ५, २०७४
नेपाल सरकार जीउँदै छ भने यी पीडितहरुको उद्दार गरोस । नेपालमा कानुनी राज छ भने आततायी मानव तस्करहरु र अध्यागमनका भ्रष्ट पिपासुहरुलाई कारबाही गरोस । नेपाल सरकार जागा छ भने आँखा खोलेर हेरोस न कि मसानघाटको मुर्दा जस्तो टिंग्रिंग उभिनुको अर्थ छैन । नत्र हामी भन्ने छौं 'मेरो सरकार निर्जीव छ । मरिसकेको छ मेरो सरकार !'
अमेरिका होइन, युएई आउनुस्
मेघराज सापकोटा, असार २८, २०७४
तपाईं अमेरिका जान सक्नु भएन ? तपाईं युरोप जान सक्नु भएन ? जापान जान सक्नु भएन ? दलालले पैसा खायो ? हातमा सीप, क्षमता र योग्यता छ ? अमेरिका र युरोप जान किन मरिहत्ते गर्नु हुन्छ ? तपाईं अमेरिका गएर महिनाको एक दुई हजार डलर मात्रै कमाउने हैन ? अब त्यता हैन यता आउनुस् ।
युएईस्थित नेपाली दूतावासका फेहरिस्ता
मेघराज सापकोटा, जेष्ठ ११, २०७४
हालै संयुक्त अरव इमिरेट्स (युएई)का लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत नेत्रबहादुर टण्डन भन्दै थिए,‘सेकेण्ड, मिनेट र घण्टा मेरो नीति हो । दूतावासमा काम लिएर आएका नेपाली वा बिदेशीको सेकेन्डमा सुन्ने, मिनेटमा प्रक्रिया सुरु गर्ने र एक घण्टा भित्र काम फत्ते गरेर बिदाई गर्छौ ।’
युएईमा बसेर देख्ने गरेको सपनाहरु
मेघराज सापकोटा, चैत्र २९, २०७३
सम्भवत: नेपालीले अव लोडसेडिङको समस्या भोग्नु नपर्ला । सरकारले लोडसेडिङ मुक्त बनाउन चालेको अभियानबाट देश बिदेश सबैतिर एउटा उत्साह थपेको छ । सरकारले छिट्टै नै अधिराज्यभर सदाको लागि लोड सेडिङ अन्त्यगर्दै उज्यालो नेपाल निर्माणको घोषणा गर्नुले अब मुलुकले बिकासको गति लिन्छ भन्ने विश्वास र उत्साह जनतामा छाएको छ ।